Okthobha 2021 - Iphepha 22 of 22 - Funda ukurhweba
Inyanga: October 2021
I-Binance Coin (BNBUSD) Ixabiso: IiBulls Dominate, zijolise kwinqanaba le-430 yokuXhathisa
Ukuhlaziywa: 1 October 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Okthobha 01
Ixabiso linokufikelela kwinqanaba lokumelana ne- $ 430, ukuba inqanaba elikhankanyiweyo liphuliwe, amanqanaba oxhathiso lwe- $ 503 kunye ne- $ 599 aya kuba yithagethi. Ukuba iibhere zikhusela inqanaba lokumelana ne- $ 430, ixabiso lingawela kwinqanaba lokuxhasa lama- $ 364, $ 311 kunye ne- $ 254.
Amanqanaba okubonelela: $ 430, $ 503, $ 599
Amanqanaba emfuno: $ 364, $ 311, $ 254
I-BNBUSD yexesha elide iTrend: Bullish
I-BNBUSD inyanzeliswa kwimbonakalo yexesha elide. Ukusekwa kwipateni ephezulu yetshathi egqityiweyo kwinqanaba lokuxhasa le- $ 311 ngoSeptemba 28. Iinkunzi zeenkomo zafumana amandla ngakumbi ngokwenziwa kwekhandlela lemihla ngemihla elomeleleyo. Inqanaba langaphambili lokumelana ne- $ 364 sele liphuliwe kwaye ixabiso liyonyuka liye kwinqanaba lokumelana ne- $ 430.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, Okthobha 01
I-Binance Coin ithengisa ngaphezulu kwee-EMA ezimbini njengophawu lwendlela yokuqhubela phambili. Ukuhamba okukhawulezayo kwe-EMA (amaxesha ali-9) uzama ukuwela i-EMA ehamba kancinci (amaxesha angama-21). Ixabiso linokufikelela kwinqanaba lokumelana ne- $ 430, ukuba inqanaba elikhankanyiweyo liphuliwe, amanqanaba oxhathiso lwe- $ 503 kunye ne- $ 599 aya kuba yithagethi. Ukuba iibhere zikhusela inqanaba lokumelana ne- $ 430, ixabiso lingawela kwinqanaba lokuxhasa lama- $ 364, $ 311 kunye ne- $ 254. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 likwinqanaba lama-50 elalathe phezulu libonisa uphawu lokuthenga.
I-BNBUSD yexesha eliphakathi iTrend: Bullish
Ingqekembe yeBinance ikukuhamba okunyusayo kwitshathi yeeyure ezi-4. Abathengisi babelityhale ngempumelelo ixabiso ukuya kwinqanaba eliphantsi lenkxaso yeedola ezingama-311 ngoSeptemba 26. Kwakukho impendulo engalunganga evela kubathengi ngokwenziwa kwekhandlela lokugubungela ikhandlela. Intshukumo yokuqalisa iqale kwaye amaxabiso anyuka ukwaphula inqanaba lokumelana ne- $ 364. Umdlandla wokunyusa uyelela ukuya kuthi ga kwinqanaba le-430.
I-BNBUSD 4 itshathi yeeyure, Okthobha 01
I-Binance Coin ithengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukuba abathengi balawula intengiso.
Igolide (i-XAUUSD) kwiNdlela esezantsi, ukuLala ubuso kwiNqanaba le-1,760
Igolide (XAUUSD) yexesha elide iTrend: Ukurola
Igolide (XAUUSD) ibikukuhamba ecaleni kwicala elingaphantsi koxinzelelo oluphezulu kwi- $ 1,830. Ukuhamba kwecala kuyaqhubeka ukusukela ngoJulayi. Nge-2 kaSeptemba, abathengi baphinde baphinda baxhathisa ngaphezulu kwe- $ 1,830 kwaye baphoswa. Imakethi iye yehla ukusukela nge-2 kaSeptemba. Ixabiso leGolide lenza uthotho lwezinto eziphantsi nezisezantsi. Iimarike ziyancipha ukusuka kwinqanaba eliphezulu le-1,760.
Igolide inee-crossovers ezi-bearish. Iintsuku ezingama-21 ze-SMA zinqumleza ngaphantsi kweentsuku ezingama-50 ze-SMA ezibonisa umqondiso wokuthengisa. Igolide ikwinqanaba lama-44 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba imakethi ikwi-bearish trend zone kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-50 zeentsuku ze-SMA zithambekele ezantsi zibonisa ukwehla.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso leGolide lisezantsi. I-SMA yeentsuku ezingama-21 isebenza ngokunganyangeki kwixabiso leGolide. Okwangoku, ngoSeptemba 23 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba iGolide iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci okanye kwinqanaba le-1,706.77.
Igolide ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho. Ixabiso legolide liyawa. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge ezantsi zibonisa ukwehla.
Ixabiso leXAUUSD lihamba phantsi. Imakethi ijongene nokuchasana kwindawo ephezulu ye- $ 1,760. Ukuba ixabiso leGolide liphuka ngaphantsi kwenqanaba le-1,726, i-downtrend iya kuphinda iqale.
← Entsha izithuba 1 ... 21 22abaDala izithuba →